सिनो बेच्नेलाई कारवाही गर्नु प्रशंसनीय काम | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / सिनो बेच्नेलाई कारवाही गर्नु प्रशंसनीय काम
सिनो बेच्नेलाई कारवाही गर्नु प्रशंसनीय काम
Posted by: युगबोध in विचार October 15, 2018	0 192 Views
बिरामी भइमेरेको खसी बे च्ने र किन्ने दुबै जनालाई घो राही– १४ ले जनही एक हजार जरिवाना गरे को समाचार सार्वजनिक भयो  । सबै का लागि यो नौ लो भयो , खासमा अनौ ठो थिएन ।
रिक्सामा मरे को खसी लै जादै गरे को दे खे पछि कसै ले वडा कार्यालयमा फो न गरे र सुराकी दियो  । वडाध्यक्ष शक्तिराम डा“गीका अनुसार आफ्नो नाम गो प्य राख्ने शर्तमा डराई डराई भने को थियो  ।
संयो गवश वडा कार्यालयले आयो जना गरे को दशै ंमिलन कार्यक्रममा नया विषयले प्रवे श पायो  । जाड रक्सी खाएर, जुवा तास खे ले र प्रहरीले पकडे पछि छुटाउन नजाने छलफल चलिरहे को थियो  । त्यसै बे ला माकेर् टतिर लै जादै गरे को बिरामी पशुको खबर आयो  । सहभागीलाई प्रश्न जगायो । दशै ंमा अत्यधिक बिक्री हुने मासु बिरामी र मरे को बे चिन्छ । अनि माकेर् टबाट ल्याएको मासु कसरी ग्राहकले विश्वास गनेर् ?
खासमा मरे का पशु चौ पाया ओ सारपसार गरे को दे ख्ने जो सुकै ले विरो ध गर्नुपर्दथ्यो  । त्यस्तो संस्कारको विकास भएको छै न । हात–हातमा मो बाइल भएको जमानामा सजिलो छ । लुकी चो री सिआइडी गर्न वडा वा प्रहरी कार्यालय पुग्नुपदैर् न ।
यस् ता घटनाहरु वर्षांै दे खि हु“दै आएका छन् । मरे का सिनो हरु मान्छे हरुलाई बे च्नुहुन्न भन्ने चे तना नभएको हो इन । सिनो खानुहुन्न भन्ने मा सबै सजग छन् । अरुलाई भने झुक्याएर खुवाउ“छन् । त्यो अन्याय मात्रै हो इन धार्मिक हिसाबले पाप यसै लाई भन्छन् । त्यति हु“दा पनि सजिलै कमाउने नाममा अने कौ ं कपट गरे र झुक्याउछन् ।
यस् ता कथाहरु थुप्रै छन् । बजारमा चिया पिउ“दै एकजनाले गफमा भन्नुहुन्थ्यो – छिमे कीको भै ंसी म¥यो  । बजारबाट मासुका व्यापारीहरु गए । एकै चो टि काटकुट पारेर सबै उठाएर ल्याए । मरे को भै ंसी बे च्ने रहे छन् । भै सीका मालिकका छो रा बजारमा बस् छन् । उनै ले मो लतो ल गरे  । त्यही आधारमा मरे को भै ंसी उठाएर लगे  ।
यो घटनाले पनि सिनो बे च्ने गरे का छन् भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । व्यापारी मात्रै हो इन, सबै बे इमान छौ ं । त्यसै गाड्नु भन्दा यति पनि हात लाग्यो भने र चित्त बुझाउने गरिन्छ । डो को न उठे पनि चित्त बुझाउने बाटो भने र थो रै रकममा बे चिन्छ । यसकारण हामी धे रै जना त्यसका दो षी छौ ं । आफ्नो पशु चौ पाया बिरामी र मरे को मासु कसै ले पनि खा“दै न । अरुलाई खुवाउने हो , त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छ । मरे का र बिरामी पशु चौ पाय बे च्ने ले अकोर् दिन किने र पनि खानुपर्छ । संस् कार त्यस् तै बसाले पछि आफूले पनि अर्काले बे चे को सिनो किने र खानुपर्छ ।
न त त्यो खसीका साहुले मासु खाए । न त भै ंसीको साहुले मासु खाए । अरुलाई जे सुकै हो स् भने र दिए । उनीहरुले यति बुझ्नुपर्छ सिनो आफन्तले किने र खाएका छन् । आफूजस् तै मान्छे ले किने र खाएका छन् । उनीहरुलाई पनेर् समस् या मलाई हो  । उनीहरुको स् वास् थ्यमा आउने खराबी मै ले बे चे को सिनो ले हो भन्ने बुझ्दै नौ ं ।
यस् ता यावत कारणले मासु बिरो धीहरु बढिरहे का छन् । जय गुरुदे व, पतञ्जलि अने क नामबाट मासु त्यागिदै छ । माछा, मासु, अण्डा पो षणयुक्त खानाको रुपमा व्याख्या पनि भइरहे को छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो आत्मकथामा भन्नुभएको छ– बाहुन परिवारमा मासु चल्दै नथ्यो  । के टाके टी भएपछि डाक्टरले मासु खुवाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह दिए । अकोर् चुलो बनाएर हामीले मासु खान लाग्यौ ं । यस्ता थुप्रै कारण छन् तागत र पो षणका लागि माछा मासु खाने हरु थपिने गर्छन् ।
त्यसो भन्दै मा जे पायो त्यही अवस्थाको मासु खाने हो इन । जनावर यो ऊ भन्नु गलत हो  । स्वस्थ जनावर जसको मासु खाए पनि हुन्छ । पकाउन जान्ने र खाने इच्छा लागे पछि जुन पशु पंक्षीको मासु खाए पनि हुन्छ । हामी भन्दा कै यौ ं विकसित मुलुक चीनमा यो खाने त्यो नखाने भन्ने प्रश्न हुदै न । चे तनाथ आचार्यको चीन चिहाउदा पुस्तकका अनुसार कसै ले भे ज भन्यो भने , मासु मात्रै , आन्द्राभुडी मात्रै , गो रुको मात्रै , मुसाको मात्रै जस्तो गरी बुझिन्छ । यहा भने यो न त्यो जात, यो मासु खान मिल्ने त्यो मासु खान नमिल्ने जस् ता कुरामा अल्झे का छौ ं ।
सस् तो र चल्ने मासुका नाममा के ही दिनअघि महो त्तरीमा ठूलो घटना भयो  । समाचार अनुसार भारततिरबाट ल्याएको एक सय रुपै या“को तीन किलो माछा खानाले सिंगै गाउ“ बिरामी बन्यो  । झाडापखाला फै लियो  । स् वस् थ माछा खाएको भए त्यहा“ त्यत्रो क्षति हुने थिएन । खाने बित्तिकै वाक वाकी आउनुपर्छ भन्ने छै न । माछा खाएकालाई पनि तीन दिनपछि बिरामी बनाएको थियो  । अरु सिनो ले पनि ढिलो असर गर्न सक्छ ।
अकोर् एकजनाले सुनाए, मो टरसाइकलमा झुण्ड्याएका टाउका काटे का चल्ला बो के र घो राहीतिर ल्याउदै थियो  । ती मरे का चल्ला हुन् । जिउ“दा चल्ला त्यसरी किन टाउको काट्नुपर्दथ्यो र ? पत्रकारले के हे र्नुभा छ ? त्यस् ता खो जे र समाचार बनाउनुप¥यो  । फो टा खिचे र हाल्नुपयो  । उनी आफै ले एक सयमा कल गरे र प्रहरी गुहारे को भए समाजका जिम्मे वार नागरिक ठहरिन्थे  । वडा कार्यालयमा उजुरी गरे को भए हुन्थ्यो  । चिया पसलहरुमा फुर्सदिला गफ लगाउने खुराक मात्रै बनाए । समाज परिवर्तनका लागि भूमिका दे खिएन । जिम्मे वार नागरिकको भूमिका उनले निर्वाह गर्न सके नन् । पत्रिकामा छाप्नु मात्रै हरे क समस् याको समाधन हो इन ।
अरुको खो रबाट मरे का बाख्रा ल्याएर बिमाको स् िटकर लगाउ“दै फो टा खिच्दै रकम असुल्दै गरे को सुनियो  । यसरी मरे का सिनो हरुको मूल्य अत्यधिक मानिन्छ । मरे का जनावर सकभर गाउ“बस् तीमै खपत हुने गरे को छ । यदि मासु नखाने क्षे त्र हो भने माकेर् टमा लगे र बे चिन्छ । एकातिर हटाउन सजिलो अकोर् तिर पै सा आउ“छ ।
मरे का पशु चौ पाया, दो पाया खाने कुरा स् वास् थ्यका लागि लाभदायक हो इनन् । गरिवीका नाममा सस् तो मा पाइने मरे का पशु चौ पाया दो पाया खाने गरिएको छ । ब्रो लर खो रमा मरे का चल्ला माग्न आउने हरु धे रै छन् । बाख्रा पाठा मरे पनि त्यसलाई लगे र खाने हरु पनि छन् । कति खसी बाख्रो मरे पछि मात्रै मासु खाने इच्छा पूरा गनेर् हरु छन् । ती जिउ“दो काटे को ठाउ“ पुग्दै नन् । मरे को छ भने उठाउछन् ।
कहीं न कहीं कतै न कतै मरे का पशु चौ पाया खाने गरिएको छ । स् वे च्छाले खाने हरुलाई विस्तारै चे तना भरे र छुटाउने हो  । राज्यले नीति नियम बनाएर उनीहरुलाई सजग बनाउनुपर्छ । जसले सिनो लाई जिउ“दो मासुसरह बे च्छ उनीहरुलाई पढाउन जरुरी छै न । आज बिरामी काटे को छु । मरे का मासु लिएको छु भने र बे च्दै नन् । त्यस् ता व्यक्तिलाई दण्ड दिनुपर्छ । त्यति गर्न नसके सरकारको अनुभूति दिलाउन सकिन्न । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत संस् कार फै लिन्छ ।
सर्पले टो के र मरे को खसी जिउ“दो सरह बे चे को घटना छ । विषालु घास खाएर मर्न लागे को लाई काटे र बे चे का पनि छन् । सुकाएको बिस् कुन खाएर मरे को पनि खान्छन् । रो ग लागे र थलिएको पनि काट्छन् । नमदैर् काटे पछि रगत सर्किन्छ भने र हतार हतार छिनाल्छन् । मरे को काटे पछि सबै मासुमा रगत मिसिएको जस् तो हुन्छ । खाने बे ला पनि स् वाद हुन्न । तर उनीहरुले जिउदो सरहको मूल्य गदैर् नन् । कसै लाई खसी काटे को छु भने र झुक्याएर पनि दिदै नन् ।
स्वे च्छाले मरे को मासु खान्छन् । बजारमा भने जिउदो सरहको मूल्यमा झुक्याएर बे च्ने गरे को खुले को छ । घो राही–१४ ले बिरामी खसी बे च्ने लाई गरे को कारवाही पछिल्लो र ताजा प्रमाण हो  ।
त्यसरी जिउ“दो सरहको मूल्यमा झुक्याएर बे च्ने लाई कारवाही गर्नुपर्छ । त्यसको शुरुवात घो राही उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा विपत व्यवस् थापन समितिका संयो जक समे त रहनुभएका शक्तिराम डा“गीले गर्नुभएको छ । बधशाला र मासु माकेर् ट पनि त्यही वडामा पर्छ । त्यसकारण पनि स् वस् थ मासु खुवाउनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यस् तो मामिलामा एक पटक माफ भन्ने हु“दै न । अञ्जान र झुक्किएर गल्ती गरे को ले मात्रै छुट पाउ“छ । त्यो अवस् था बजारका मासु पसलको छै न । मरे का कुखुरा, खसी, बो का, बाख्रा, भै ंै सी जे सुकै बे चे पनि कारवाही गर्नुपर्छ ।
पालकले पनि मरे का र बिरामी पशु चौ पाया बे च्नुहुन्न । यसमा आमनागरिक र स् थानीय सरकार उत्तिकै सचे त हुनुपर्छ । रो गव्याधीबाट बच्न स्वस्थ खानुपर्छ । उचित रकम दिएर किन्ने ले उचित मासु पाउनुपर्छ । यसको शुरुवात भएको छ । सबै ठाउमा यसलाई फै लाउनुपर्छ । घो राही–१४ को यो प्रशंसनीय काम हो  ।
Previous: कोसेली घरले उद्यमीलाई उत्साही बनाओस्
Next: प्रकृति र हाम्रो सोच
मान्छेको जात सबभन्दा अप्ठेरो
लोकस्वास्थ्यकर्मीहरु र राज्यको नीति